सन्तोष पन्तको ‘हिजो आजका कुरा’ घोषणा, कलाकार को-को ? « THULOPARDA.COM
एक समयको चर्चित हायटेलिश्रृंखला ‘हिजो आजका कुरा’ नाममा चलचित्र निर्माण हुने भएको छ । शुक्रबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच यस चलचित्रको औपचारिक निर्माण घोषणा गरियो । यो सिरियलका प्रमुख कलाकार तथा निर्देशक सन्तोष पन्तका छोरा साकार पन्तले चलचित्रको निर्देशन गर्नेछन् । तिहारपछि चलचित्रको छायांकन सुरु हुनेछ ।
कुनै न कुनै तरिकाले विदेशसँग सरोकार राखेका वा राख्न इच्छुक काठमाडौंका चार परिवारको पारिवारिक समस्या, संघर्ष र आतुरतासँगै विदेश जाने सपना पूरा गर्न केही न केही गुमाउनु पर्ने विषयवस्तुमा चलचित्र निर्माण हुने निर्देशक पन्तले जानकारी दिए । सन्तोष सन्त र साकार पन्तको कथालाई सन्दीप किस्नाले पटकथामा ढालेका छन् । रवि सायमीले चलचित्र खिच्नेछन् । भने, हर्कुलस बस्नेतको संगीत रहनेछ ।
‘हिजो आजका कुरा’ सिरियलका प्रमुख कलाकार सन्तोष पन्त र रमा थपलियाकै प्रमुख भूमिका रहने चलचित्रमा केकी अधिकारी, ऋचा शर्मा, रिमा विश्वकर्मा, जेविका कार्की, रमेश अधिकारी, सविन शाक्यसँगै नव-कलाकार द्वय विनायक कुइकेल, अनुष्का घिमिरेलगायतकोे अभिनय रहनेछ । पन्त फिल्म प्रोडक्ससनकोे ब्यानरमा चलचित्र बन्न लागेको हो । सिरियल पनि यही कम्पनीबाट निर्माण भएको थियो ।
चर्चित सिरियलको नाम सापटी लिएर चलचित्र निर्माण गर्नु आफ्नो लागि चुनौतीपूर्ण रहेको निर्देशनमा डेब्यू गर्न लागेका साकारले बताए । ब्रान्ड बेच्नका लागि सिरियलको नाममा चलचित्र बनाउन लाग्नुभएको हो ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, ‘ब्रान्ड बेच्नका लागि चलचित्र बनाउन लागेको चाहिँ होइन । ‘हिजो आजका कुरा’ पन्त फिल्म प्रोडसक्नको पहिचान हो । यो नाम चलचित्रको कथाको माग हो ।’